किसमिसको पानीले गर्छ यस्ता उतुलनिय चमत्कारिक फाईदा ! यसरी प्रयोग गर्नहोस दिमागी शक्ती देखी प्रेसरका बिरामीका लागि लाभदायक ... - Sudur Khabar
किसमिसको पानीले गर्छ यस्ता उतुलनिय चमत्कारिक फाईदा ! यसरी प्रयोग गर्नहोस दिमागी शक्ती देखी प्रेसरका बिरामीका लागि लाभदायक …
admin December 15, 2017 जीवनोपयोगी 0
Total Reader : 63
किसमिसिको पानी लागातार ४ दिनसम्म पिउनाले कलेजो र किड्नीले राम्ररी काम गर्न थाल्छन् र शरीरमा जमेका हानिकारक पदार्थ सबै बाहिर निस्कन्छन् ।
किसमिस खान स्वास्थवद्र्धक छ भने त्यसको पानी पिउनाले पाचन प्रक्रियालाई दुरुस्त हुन्छ । रगत सफा हुन्छ । एसिडीटी कम हुन्छ । हृदय बलियो हुन्छ र खराब कोलेस्ट्रल टाढा हुन्छ । यो सबै फाइदा किसमिसको पानी पिउन थालेको दुई दिनमा नै देखा पर्नेछ । किसमिसको पानी २ कप पानीमा १५० ग्राम किसमिस राखेर बनाउन बनाउन सकिन्छ ।
यो घरेलु तरिका बाट गर्नुहोस् पाइल्स रोगको उपचार तरिका सहित …